RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Man United guusha kasoo gaartay Sunderland ee Premier League – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay kooxda Man United guusha kasoo gaartay Sunderland ee Premier League
(Sunderland) 10 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa soo degtay shalay kaalinta shanaad ee kala horreynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay 3-0 ku soo garaacday naadiga Sunderland oo ay ku booqdeen garoonka Stadium of Light.
Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan iyo Marcus Rashford ayaa saddex gool shabaqa gaarsiiyay kulankan, waana guushii ugu weynayd muddooyinkii lasoo dhaafay oo ay gaarto Red Devils, inkastoo ay caawisay kaar casaan ah oo loo taagay laacibka Sunderland ee Sebastian Larsson.
>- Manchester United ayaan dhinaceed dhulka la dhigin oo unbeaten ah sagaal kulan oo ay Premier League ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda, 7 kulan guul ayey soo gaareen halka 2 kulan ay barbaro soo galeen, waana guuldarro la’aantoodii ugu dheereyd kulamada bannaanka tan iyo December 2012 ilaa August 2013 oo aan dibadda looga soo adkaan 13 kulan.
>- David Moyes ayaa guuldarro kala kulmay 16 kulan oo Premier League ah oo isagoo tababare ah ka hor yimid kooxda Manchester United, waana in hal ka yar tirada Premier League ee uu ku guuleystay isagoo tababare u ah Red Devils oo ah 17 kulan.
>- Marcus Rashford ayaa soo gabagabeeyey 20 kulan oo uu gool la’aan ahaa Premier League, kaddib markii uu shabaqa ka soo taabtay kulan 4-1 ay kaga adkaadeen naadiga Leicester City 24 bishii September sanadkii 2016.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa dhaliyey 9 gool siddeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay Man United ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Sebastian Larsson ayaa loo taagay kaarkiisii casaanka ahaa ee ugu horreeyey Premier League, kaddib 278 kulan oo uu ciyaaray tartankan.
>- Goolkii Mkhitaryan ayaa dhashay kaliya 45 ilbiriqsi markii la bilaabay qeybta labaad ee ciyaarta, iyadoo ciyaaryahan kasta oo Sunderland ah uusan taaban kubadda.
>- Henrikh Mkhitaryan ayaa gacan ka gaystay 11 gool 23-kii kulan ee ugu dambeeyey oo uu Man United u ciyaaray tartammada oo dhan, 8 gool waa uu dhaliyey, halka 3 gool oo kalena uu dhiibay ama caawiyey.
>- Luke Shaw ayaa sameeyey gool caawintiisii ugu horreysay horyaalka Premier League tan iyo 30 bishii August sanadkii 2015-kii, markaasoo uu gool caawin ka sameeyey kulan uu wajahay kooxda Swansea.
>- Man United ayaa hadda guuldarro la’aan ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey oo ay bannaanka ku soo ciyaartay, kulamadaas labo ka mid ah ayey barbaro gashay, waxa ayna dhalisay 20 gool, iyadoo laga dhaliyey 5 gool, 4 kulan ayeyna garoonka ka baxeen shabaqooda oo nadiif ah.
Hoowl Wadaag iyo Shangaani oo galabta ku ballansan garoonka Wiish
Kooxda Usbuuca Premier League oo la soo saaray… (Man United iyo Liverpool oo aan midna ku lahayn)